Ny fampidirana sy ny famahana ny olana momba ny «supercharger vacuum»
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny supercharger vacuum sy ny boosteris vacuum izay misy ny booster vacuum eo anelanelan'ny pedal frein sy ny silindrety master frein, izay ampiasaina hampitomboana ny dian'ny mpamily amin'ny varingarin'ny master; raha mbola ao anaty fantsom-panafody kosa ny supercharger vacuum ...
Ny fitsipika miasa amin'ny fampiroboroboana ny freins
Ny booster booster dia mampiasa ny fitsipiky ny fitsentsenana rivotra rehefa miasa ny motera, izay mamorona ny banga amin'ny lafiny voalohany amin'ny booster. Ho setrin'ny fahasamihafana amin'ny tsindry amin'ny tsindry mahazatra ataon'ny rivotra any an-dafy, ny fahasamihafana amin'ny tsindry dia ampiasaina hanamafisana ny fanosehana braking. Raha ...
Hangzhou TieLiu Vacuum Booster Manufacturing Co., Ltd, manana traikefa famokarana maharitra 25 taona izy. Ny teo alohany dia Hangzhou guxing Industrial Co., Ltd. Nahazo guxing ny orinasa tamin'ny 2002 ary nanangana Hangzhou tieliu vacuum booster Manufacturing Co., Ltd. tamin'ny Mey tamin'io taona io, izay an'ny t ...
Novakiny Servo, Fanamafisana ny freins, Vaky frein, Fanamafisam-peo avy any aoriana, Vacuum fanamafisana, Booster Asyria, novakiny,